Afhayeenkii shirka maamul u sameynta Jubba-land ee Kismaayo iyo ergooyin isaga baxay shirkaas | Somali - Diaspora
Afhayeenkii shirka maamul u sameynta Jubba-land ee Kismaayo iyo ergooyin isaga baxay shirkaas
Afhayeenkii shirka maamul u sameynta Jubooyinka ee ka socday magaalada Kismaayo Maxamed C/llaahi Guuleed ayaa sheegay in isaga iyo ergooyin 20 kor u dhaafaya ay isaga baxeen shirkaas ka dib markii ay dareemeenn cadaalad daro.
Waxaa uu sheegay afhayeenku in shirkaas uu noqday mid u afduuban shaqsiyaad taageero ka helaya ciidamo shisheeye, aysana wax dan ah ugu jirin shacabka iyo beelaha dega gobolada jubooyinka.
“Shirka waxaa ka baxay aniga iyo ergooyin 20 xubnood gaaraya oo metelaya sadex beelood ka dib markii aan aragnay in shirka laga weeciyey jihadii uu ku socday ayna afduubteen labo shaqsi oo kala ah Axmed Madoobe iyo Prof. Gaandhi” ayuu intaa ku daray Maxamed C/llaahi Guuleed.
Waxaa uu intaa ku daray Maxamed C/llaahi Guuleed in shirkaas aysan dib ugu laaban doonin, matiijada ka soo baxdana aqoonsan doonin, isagoo xusay iney hadda arkeen khaladaadka aan markii hore u muuqan oo shirkaas ay ku diiday dowlada.
“Nimankan shirka afduubtay ee Axmed Madoobe iyo Prof. Gaandhi, dowlad Soomaaliyeed dan kama leh, meesha waxaa keenay keenay haddana iyadey meesha madax uga noqoneyaan waa caamiliin u shaqeeya Kenyaatiga, hadey dowladnimo rabaan shirka ayey ku wareejin lahaayeen” ayuu intaa ku daray afhayeenkii shirka Kismaayo.
waxaa sii kordhaya cabashada ka soo yeereysa ergooyinka shirkaas ka qeyb galaya oo maalin walba ay shirkaas ka baxeyso qeyb ka mid ahm waxaana warar ku dhow dhow shirka ay sheegayaan in laga saarayo ergooyinka loo arko iney mucaaradsan yihiin Axmed Madoobe, si ay suuragasho in loo doorto madaxweynaha Jubbaland.
Cali Khaliif Galeyr oo lagu eedeeyay inuu ka shaqeynayo burburka maamulka Somaliland Xarakada Al-Islaax oo Warsaxaafadeed ay soo Saartay ku Beenisay in Ururkooda uu la Midoobay Urur kale